डा। पैट्रिक य Young्ग, लेखक aasraw - पृष्ठ ११ को। 37
Cialis: यसलाई कसरी लिन्छ र यो कति लामो छ
Dr. Patrick Young मा लेखियो Cialis, tadalafil .
30 मिनेट भित्र प्रभावकारीता को शुरुवात संग Cialis पाउडर कार्य गर्दछ र कसरि Cialis रहन्छ त्वरित प्रभाव अन्य ED दबाइहरु को तुलना मा अधिक चाँडै असर गर्न को लागी। यसका लागि यो समस्या हो कि तपाईले यौन क्रियाकलापको लागि Cialis पाउडर 30 मिनेट लिनु भएको छ, जबकि र लेभीट्र्रामा प्रयोगकर्ताहरूले औषधीको लागी 60 मिनेट लिन [...]
Dr. Patrick Young मा लेखियो Cialis, tadalafil संग 1 टिप्पणी .
Cialis 20mg को लागी काम गर्न कति लामो लाग्छ? Cialis के छ? एक औषधि को लागी व्यापार नाम हो। सीआईडीएस पीडीई-5 (फास्फोमेस्टरएस्टर प्रकार 5) अवरोधकहरूको रूपमा चिनिने औषधिको एक वर्ग हो। सीआईएलिस र अन्य पीडीई-5अवरोधकहरूले erectile को बढाएर erectile dysfunction पुरुष (पुरुष निर्वाह) संग मद्दत गर्न सक्छन् [...]
Dr. Patrick Young मा लेखियो उद्योग ज्ञान .
योहोबिन के हो र यो कसरी काम गर्दछ? योहोम्बाइन के हो? योहोम्बेन एक प्रकारको उत्पादन हो। यो पनि शरीर निर्माणको क्षेत्रमा लोकप्रिय छ। यसले रक्तको भाँडाहरू बढाउँछ र लिंगमा रक्त प्रवाह बढाउँछ, जसले अत्याधुनिक प्रकार्यलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यो कम्पाउन्ड सयौं वर्षको लागि एक एकरूपात्मक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र पुरुषको यौन सुधार गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। स्वास्थ्य र जीवनशैली, र [...]
कच्चा स्टेरॉयड पाउडरबाट टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट कसरी समाप्त गर्ने
Dr. Patrick Young मा लेखियो टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट संग2टिप्पणिहरु .
बडिबिल्डिंग क्षेत्रमा, त्यहाँ एक बिक्रि स्टेरॉइड-टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट पाउडर छ, जसले मांसपेशी निर्माण गर्न र हड्डिहरु बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। वसा हानि र यौन वृद्धिको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। मानिसहरु प्राय: अनलाइन टोनबाट टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट उत्पादनहरू छन्। स्टेरियोड्स कच्चा पाउडरलाई यसको कम मूल्यको कारण र कडा मेहनत गर्ने विधिहरू छैनन्। आज हामी साझेदारी गर्न यहाँ छौं [...]
कानूनमा स्टेरियोड पाउडर: कानूनी वा अवैध
Dr. Patrick Young मा लेखियो स्टेरियोड्स .
कानूनमा स्टेरियोड्स पाउडर: कानूनी वा गैरकानूनी एनाबोलिक स्टेरियोड्स पाउडर, एनाबिक-एंड्रोजेनिक स्टेरियोड पाउडर (एएएस) को रूप मा पनि राम्रो तरिकाले जानिन्छ, स्टेरॉइडल र एन्ड्रेन्स हुन् जसमा प्राकृतिक टोस्टर समावेश गर्दछ जुन टेस्टस्टोस्टेरोन जस्तै राम्रो तरिकाले सिंथेटिक एन्ड्रोन्स हुन्छ जसमा संरचनात्मक रुपमा सम्बन्धित छन् र त्यस्ता प्रभावहरू । तिनीहरू कोशिका भित्र एनाबोलिक र वृद्धि प्रोटीन हुन्, विशेष गरी कंकाल मांसपेशिहरु मा, र [...]